Top 10 tsara indrindra teti-bola tsy misy headphone 2022 - Victor Mochere
Tadidinao ve ireo andro izay namatotra anao tamin'ny fitaovana fihainoana mozika tamin'ny alalan'ny tariby mifatotra amin'ny fonon-tanana? Efa lasa tanteraka ireo andro ireo, saingy mbola afaka mahazo sobika misy tariby misy tariby (raha tianao). Ny karazany tsy misy tariby no safidy tsara indrindra ho an'ny olona amin'izao fotoana izao. Izy io dia manome fahafahana hivezivezy tsy misy tariby mihantona amin'ny lalanao. Noho izany, azonao atao ny mametaka ny mozika tianao indrindra amin'ny fahalalahana bebe kokoa. Miaraka amin'ny safidy maro azo atao, mety ho sarotra ny misafidy ny mpivady mety.
Ireto ny top 10 tsara indrindra headphone tsy misy finday.
Raha mpankafy ny famolavolana over-sofina ianao dia tokony hahazo ireto écouteur tsy misy tariby ireto. Izy ireo dia miaraka amin'ny feo stereo Hifi miaraka amin'ny mpamily 40mm roa ao anaty sofina. Inona koa? Izy ireo dia manana active-noise-reduction (ANC) izay mitazona ny tabataba tsy ilaina. Ny ampahany tsara dia manana endrika mampahazo aina izy ireo miaraka amin'ny foam sofina cushion fahatsiarovana ary fehin-doha azo amboarina. Rehefa mampiasa ireto écouteur ireto ianao dia hahazo 40 ora famerenam-peo aorian'ny 4 ora fiampangana.
Ireo écouteur ireo koa dia manana endrika over-ear. Izy ireo dia fitaovana amin'ny fanafoanana ny feo passive izay ilaina amin'ny fampifandanjana ny feon'ny écouteur. Ny fonon-tsofina proteinina fitadidiana sy ny fehin-doha azo amboarina dia manome fampiononana ambony indrindra. Hahazo safidy hiasa amin'ny maody tariby sy tsy misy tariby ianao. Miaraka amin'ny maody tsy misy tariby dia haharitra 20 ora ny sofinao. Mba hanomezana fahafaham-po fanampiny dia tonga miaraka amin'ny endrika azo aforitra sy kitapo entina ho fiarovana azy ireo mandritra ny fitaterana.
Ireo écouteur amin'ny sofina famolavolana tsy misy tariby dia lehibe sy matanjaka. Izy ireo dia manana toerana fampiononana izay manampy haavon'ny fanamorana ny mpampiasa. Izy ireo dia azo aforitra, maivana amin'ny lanja, ary compact ho an'ny fahafinaretanao. Ny bateria dia maharitra hatramin'ny 11 ora amin'ny fiampangana tokana. Izy ireo dia manana fifehezana mikrofo sy bokotra ho an'ny antso sy mozika. Izy ireo dia miaraka amin'ny ondana sofina malefaka sy fehin-doha azo amboarina mba hanomezana fampiononana fanampiny.
Ireo écouteur teti-bola mihoatra ny sofina ireo dia manome ny sanda tsara indrindra amin'ny vidiny. Izy ireo dia napetraka miaraka amin'ny fanafoanana ny feo mavitrika izay manome ny kalitaon'ny feo sy ny fahamarinan'ny indostria. Ny feo dia avy amin'ny mpamily 240mm izay manome kalitao feo mavitrika. Miaraka amin'ny fehin-doha azo amboarina sy kabone sofina proteinina fitadidiana, dia hahatsapa ny fampiononana faran'izay tsara ianao. Ny fifandraisana Bluetooth amin'ireo sofina ireo dia mahatratra 33ft. Hahazo adaptatera fiaramanidina sy vata fiarovana miaraka amin'ireo écouteur ireo ianao.
Raha tena tianao ny fahafahan'ny bass lalina amin'ny écouteur, dia tapitra eto ny fikarohanao. Levin budget headphones no safidy tsara. Hahazo kalitaon'ny feo mahavariana ianao amin'ny alàlan'ny mpamily 40mm. Ireo écouteur ireo dia manana Bluetooth 4.1 izay manome fampifandraisana tsy misy dikany miaraka amin'ny antso latsaka kely kokoa na ny fandalovan'ny mozika. Mahazo aina ny mitafy azy ireo noho ny fehin-doha azo amboarina sy ny sofina fitadidiana proteinina. Raha te-hihaino maharitra kokoa ianao dia maharitra hatramin'ny 15 ora ireo écouteur ireo. Miaraka amin'ny fanaraha-maso mic sy bokotra ao anatiny, dia ho mora kokoa ny fitetezana.
Raha mpankafy ny endrika mekanika ianao, dia ireto écouteur ireto no safidy mety. Izy ireo dia miavaka amin'ny hafa amin'ny headphone tetibola. Miaraka amin'ny maody EQ 5 misaraka, dia hahazo traikefa voalanjalanja be ianao. Ny fonon-tsofina proteinina fitadidian'izy ireo dia maka tahaka ny tontolon'ny sofin'olombelona izay manome fampiononana bebe kokoa. Mba hanomezana anao traikefa fihainoana tsara dia tonga miaraka amin'ny endri-javatra mitokana ny tabataba izy ireo. Raha misafidy ny fomba tariby ianao dia tsy mila mamerina ny bateria. Saingy, raha misafidy ny handeha Bluetooth ianao dia haharitra hatramin'ny 20 ora ny bateria amin'ny fiampangana tokana.
Ireo écouteur over-sofina ireo dia manome fampiononana sy kalitao tsara. Manana feo voalanjalanja tsara izy ireo ka tsy mahatazona ny bass. Tsy tonga amin'ny endri-javatra fanafoanana ny tabataba mavitrika izy ireo. Fa ny sofina dia mipetraka tsara eo amin'ny loha mba hanakanana ny tabataba tsy ilaina. Hahazo bokotra fanaraha-maso mozika na famerenana mivantana eo amin'ny sofina ianao. Miaraka amin'ny fehin-doha malefaka sy azo amboarina, dia hahazo fampiononana lehibe kokoa ianao mandritra ny fihainoanao.
Raha tianao ny endrika mamirapiratra, dia tokony handeha amin'ireto écouteur ireto ianao. Sady futuristic izy ireo no malama amin'ny endriny. Ny chip CSR sy ny mpamily 40mm roa dia mamokatra kalitao tsara. Afaka mihaino mozika mandritra ny andro ianao miaraka amin'ny fiampangana 1.5 ora. Ireo écouteur ireo dia manana 25 ora famerenana sy fotoana fiantsoana mahafinaritra. Miaraka amin'ny Bluetooth 4.2, afaka mankafy fifandraisana tsy misy olana ianao miaraka amin'ny antso kely kokoa sy ny dingan'ny mozika. Ny mic sy ny bokotra anatiny dia manararaotra anao hifehy tsy hikasika ny fitaovanao. Izy ireo koa dia manana koban-tsofina malefaka sy fehin-doha azo amboarina.
Indraindray ianao te-hisaraka amin'ny tontolo ivelany fotsiny ary miroboka amin'ny sangan'asa melodika. Izany no tena mety amin'ireo écouteur ireo. Mamokatra kalitao tsara kokoa izy ireo amin'ny alàlan'ny mpamily 40mm sy ny chip CSR8635. Miaraka amin'ny bokotra sy mic ao amin'ny sofina dia azo atao ny manao hetsika tsy misy tanana mandritra ny antso sy mozika. Ny fifandraisan'izy ireo Bluetooth dia tsy misy dikany ary ny bateria dia maharitra hatramin'ny 20 ora aorian'ny fiampangana tokana.
Ireo écouteur ireo dia manana endrika marevaka sy mainty izay miavaka amin'ny ambiny. Raha te-hihaino mozika ianao nefa tsy mameno ny bateria, dia ny fomba tariby no hahatonga anao hanao izany. Na izany aza, amin'ny fomba Bluetooth, ny bateria dia maharitra hatramin'ny 13 ora. Afaka mihaino mandritra ny tontolo andro tsy misy fanelingelenana. Haheno feo tsara ianao avy amin'ny endrika over-sofina. Izy ireo dia miaraka amin'ny koban-tsofina sy fehin-doha azo amboarina izay manome fampiononana lehibe indrindra azo atao. Satria mifanaraka tsara amin'ny sofina izy ireo, ny ondana dia manakana ny feo avy any ivelany tsy hiditra.
Ireo écouteur rehetra voalaza etsy ambony ireo dia manana endri-javatra tsara indrindra ary manolotra vidiny mirary. Tokony hanao safidy ianao amin'ny fanombanana ny zavatra ilainao. Manantena izahay fa mankafy ny famakiana ity lahatsoratra ity ianao ary misafidy ny écouteur tsara indrindra ao anatin'ny teti-bolanao.
Ahoana ny fampiantranoana hetsika tambajotra mpandraharaha mahomby